Agaasimiha cusub ee wasaaradda waxbarashada oo xilka la wareegay. – Radio Daljir
Agaasimiha cusub ee wasaaradda waxbarashada oo xilka la wareegay.
Garowe, Janu, 25 ? Munaasabad ay xilka kula kala wareegayaan agaasimihii hore ee wasaaradda waxbarashada dawladda Puntland iyo agaasimaha cusub ee uu dhawaan magacaabay madaxwaynaha Puntland ayaa maantay lagu qabtay xarunta wasaaradda waxbarashada Puntland ay ku leedahay Garowe.
Munaasabadii maantay ka dhacday xarunta wasaaradda waxbarashada ayaa waxaa kasoo qayb-qaatay masuuliyiinta ugu saraysa wasaaradda waxbarashada, masuuliyiin-kasocotay hay?adaha wadashaqaynta la? leh, iyo madax ka socota hay?adaha kale ee dawladda Puntland.
Agaasimaha cusub ee wasaaradda waxbarashada Puntland ee dhawaan loo magacaabay ayaa lagu magacaabaa Maxamed C/wahaab, halka agaasimihii horena lagu magacaabo C/qaadir Yuusuf Nuux.
Madashaasi ayaa waxaa ka hadlay agaasimihii hore ee wasaaradda waxbarashada Puntladn mudane C/qaadir Yuusuf Nuux waxaana uu sheegay inay ka go?antahay sidii uu ula shaqayn-lahaa agaasimaha cusub ee xilka loo magacaabay.
Ugu dambayntii waxaa madashaasi ka hadlay agaasimaha cusub ee wasaaradda waxbarashada Puntland mudane Maxamed C/wahaab waxaana uu tilmaamay in rajadiisu tahay sidii dhammaan ubadka ku nool deegannada Puntland loo gaar-siin lahaa waxbarasho dhamaystiran, taasina ay tahay midda kaliya ee masiirka ummada Puntland ay ku hormari-karaan.